Warbixin Gaaban Waxyaalaha laga Rabo Ardayda
Home > Student Resources > Student Expectations > Student Expectations - Somali
Waxyalahan la iska rabo ayaa ah mid meeleysan oo caawin doono dhamaan ardayda siday u gaaraan horimar waxbarasho Dugsiga Dhexe ee Justice Page. Waxaan aaminsanahay in cunug walba uu awood u leeyahay inuu waxbarto kuna hormar.
Shaqada fasalka/Guriga: Waxbarashada maaha mid ikhtiyaar ah! Haddii uu ardayga doorto inuu shaqada guriga soo dhameyn ama mida fasalka, waxay aadi doonaan shaybaarka casharka guriga (HWLAB) xiliga lagu gudo jiro dhaqdhaqaaqa ilaa ay ka dhameystiraan casharada ka maqan. Waxaa HWLAB joogi doona dhaqan-celiyaha oo ka caawin doona ardayda inay shaqeeyaan oo ay na dhamastiraan shaqada ka maqan. Sida ugu dhaqsiyaha badan oo ay shaqadooda u dhamayaan, waxay fasax u yihiin inay la ciyaaraan asxaabtooda. Waxaan soo aruurin doona Khamiisaha casharada ka maqan ardayda, Lataliyayaasha/shaqalaha bulshada ayaa ardayda siin doona casharada ka maqan Jimcooyinka, waxayna heystaan ilaa iyo Axada inay soo dhameystiraan. Waa inay xafiiska shaqadooda kusoo celiyaan SUBAXA ISNIINTA kuna ridaan danbiisha loogu talagalay! Shaqalaha ayaa fiirin doona shaqada subaxa isniinta gudbin doonana ardayda shaqadooda soo dhameeyay. Isniinta ayaa noqon doonta maalinta ugu horeysa ee HWLab waxayna joogi doonaan maalin kasta ilaa ay ka dhameeyaan. Haddii ay u baahan yahiin caawinaad dheerad ah, waxay u baahan yahiin inay shaqalaha lasocod siyaan. Waxaan rabnaa in DHAMAAN ardayda horimar garaan iyo inay sii wadaan dadaalka waxbarasho sida ay uga caawiso diyaar garowga Dugsiga Sare, ayagoo sido kale baranayo xirfadaha nolosha (maamulista waqtiga, mas’uulnimo, isku hadalka iwm).
Dhaqdhaqajin(Fidgets): Haddii aan la cadeyn inay tahay qorshaha waxbarashada ee shaqsiga, lama ogalaan doono. Tan micnaheeda waa – lama ogolo geedka la wareejiyo, afargeeska, dhiiqada, ama wax la mid ah.
Lookarrada: Waxaan dhamaan ardaya Dugsiga Dhexee Justice page siin doonaa quful xiran. Arday walba ayaa ka heli doona lataliyahooda quful xiran. Ardaygaga waa inuu la wadaagin xarfaha lagu furto qufulka iyo lookarka arday kale. Ayaa ka mas'uul ah alaabta ugu jirta lookarkooda. Haddii ardaygu uu lumiyo qufulka , beddelista waa $5.00. Waxay la hadli karaan latilayahooda.
Borsooyinka: Waa inay ku jiraan ardayga lookarkiisa maalintii oo dhan. Looma ogo’laan doono xiliga qadada, inay ku dhexsitaan fasalka ama jidadka fasalada u dhexeya (xitaa xiisada 8 aad). Tan nabadgalyada ayey ku jirtaa.
Jaakadaha/Coats: Waxa in lagu hayo lookarka maalintii oo dhan. Fananada dhexanta ayaa loo isticmaali karaa dhaxan celis. Xiliga qaboobaha, ardayda waa inay horay usoo qaataan jaakadahooda intay khadada soo aadin haddii ay rabaan inay xirtaan xiliga banaanka lagu ciyaarayo.
Telefoono/makarafoono: Waxaan qabnaa sharci "telephonka la’ogoleyn". Telefonada waa in lagu hayaa lookarka maalintii oo dhan. Looma ogo’lo jidadka fasalada u dhexeeya, xiliga qadada, iyo waqtig ciyaarta, ama fasalka dhexdiisa. Telefoonka ayaa ku amaan ah inuu ku jiro lookarka haddii aysan qofkale isaga sheegin xarfaha qufulkooda. Haddii ay u baahin yahiin inay isticmalaan telefonka, waxay imaan karaan xafiiska ama waxay waydiisan karaan macallinka inay isticmalaan telefonka fasalka. Haddii aad u baahan tahay inaad lahadasho ardaygaaga si degdeg ah, waxaad soo waci kartaa xafiiska . Maalinta dhamaadkeeda, gambaleelka kadib, ardayda ayaa fasax u heysta telefoonadooda. Haddii ardayga sii wado isticmaalka telefonka, ama meel looga jeedo laga arko, waxyaalahan oo dhan ayaa u horseedi karo dambi qaadis ( qolka qadada, ISS, kulan waalid, inuu waalidka telefonka u yimaado, buris, imw.)
SABABTA ayaa ah: Qorshaha ayaa ah in la yareeyo waxyalaha ka hor istaaga waxbarashada, in hoos loo dhigo wada hadalka xun ee shaqaalaha, iyo in la yareeyo khilaafada warbaahinta bulshada iyo isxad dhaafka ardayda kor u kicin karta ama sababi karta deegaan aan amni lahayn. Waxaan rabnaa waxbarashada inay ardayga u noqoto mudnaanta koowaad.
Daahista: Ardayda waxay heystaan 4 daqiiqo ay fasalada (xiisadaha) ku kala badashaan. Haddii ardaygaagu uu daahsan yahay, waa inay fasalka kusoo galaay si aamusan, xushmad leh, kuna helaan kursigooda si fudud. Waxaa loo qorayaa inuu soo "daahay - fasaxleheyn" haddii aysan shaqaalaha ka heysan fasax.
Daahista 5 aad ka dib, waxaa lagugu qadayaa danbiga xiliga khadada waalidkana waa lala xiriiraya.
Daahista 10 aad ka dib, waxaa lagugu qaadayaa 3 danbi xiliga khadada (magdhab), waalidkana waa lala xiriiraa.
Daahista 15 aad , waxaa lagugu qaadayaa 5 danbi xiliga khadada (magdhab), waalidkana waa lala xiriiraya, dheqen celiyaya ayaa kugu qoraya qandaraska daahista, waxaana laga yaaba in laguu gudbiyo kooxda xaadirinta.
Haddii ardayga uu muujiyo daahis farabadan, xaalada waxaa eegaya dhaqan celiyaha/maa’mulka waxaana dhici kara tan: kulan lala kulmo waalidka, ganaax celis, in fasalk gooni ah laguga haayo sidaad u suubiso shaqada kaa maqan, iskuul lagaa saaro maalmo, iyo in ugu danbeyntii laguu gudbiyo nidaamka sharciga.
Waxaan aaminsanahay in imaanshaha uu taageerayo horimarka waxbarashada ee Dugsiga Dhexee Justice Page. Daahista farabadan ayaa u horseedi kartaa saaban kartana horimarka waxbarashada.
dhaqdhaqaaqa/Khado: Ardayda ayaa qiyaas ahaan khadada ku cuni doona 15 daqiiqo banaankana kusoo ciyaari doona 15 daqiiqo. Ardayda ayaa laga rabaa inay joogaan kafaterida haddii aysan haysan warqadan qoran oo ay ku booqan karaan macallin xiliga khadada lagu gudo jiro. Telefoonada lama ogola xiliga khadada (ama meel kasta). Haddii ardayga uu rabo inuu xirto jaakat xiliga ciyaarta, waa inay horay usoo qaatan inta aysan imaan qadada, looma oga’laan doona inay gudaha kusoo noqdaan ilaa laga gaarayo xiliga noqoshada. Waalidka iyo ardayda waa inay qorsheystaan in banaanka la aadayo haddii aysan ahayn “qaboow” ebar ah ama ka hooseeya. Haddii ardayda aysan aadi karin banaanka, waxaa loogu diyaarinayaa ciyaaro kala du’duwan qolka jimicsiga, xarunta warbaahinta, iyo kafateeriyada.
Cilmiga barista ayaa sheegaya in ardayda jimicsida ama firfircoon inta lagu gudo jiro maalin dugsiyeedka inay horimar ka gaaran fahanka sida xasuusta, xoogsaarida, fikir sareeya, iyo kor inay u qaado awooda maskaxda u badbadasho hawsha shaqooyinka. Ardayda firfircoon sidoo kale waxay ku muujiyaan fasalka dhaqan xumo yar. Barista ayaa sidoo kale sheegaysa in ardayda firfircoon ay ku yar tahay walwalka, niyad-jabka, cudurada wadnaha, cayilka, kaankarada qaarkood, iyo isticmaalka daawada xun.
Xeerka Dharka: Lama ogala koofida fanaanada in madaxa lagashto, lama ogola 3B's (inay muuqato dabada, naasaha, iyo xudunta), inay muuqato dharka hoos laga xirto, garanka waa la ogol yahay balse, garab fiino lama ogola, iyo mid hal garab leh, lama ogola dhar ay ku qoran yahiin luuqqada xun xun, iyo burcadda.
Ka Qaybqaadashada Fasalka: Waxaan rabnaa in ardayda yimaadaan xiliga laga rabo fasalka si buuxdana uga qeyb-qaataan waxa uu macallinka u diyaariyay maalintaas.
Warqada fasaxa/Qorsheeyaha: Ardayda ayaa waxaa 8 rubuc oo warqada fasaxa lagu siinayaa qorsheeyaha. Kuwaan ayaa ah kuwa ardayda fasax u leeyahiin markay rabaan inay biyo lku cabaan, musqusha ku isticmalaan, ama ay ku aadaan lookarkooda haddii ay soo ilowbeen shay. Markay fasaxa oo dhan ay isticmaaleen, lama siin doona kuwa dheraad ah. Waxaan rabnaa inay ardaydeena ay fasalada ku jiraan marwalba oo maq’uul ah sidaysan u seegin waxbarashada. Haddii ay lumiyaan qorsheeyahooda, lama siin doono mid kale oo wada warqada fasaxa wata. Waxay mid kale ku iibsan karaan $5.00, lakiin mahan mid wada 8 fasax.
Cago-jugleynta: Ayaa lagu sharaaxaa sida "Akhlaaq aa la rabin, gardareysi dhax martay caruur dugsiyeedka tasoo loo arko mid xoog aan isku mid ahayn leh, laguna celceliyo waqti muda ah, iyo mid dhib wata ah". Haddii ardaygaagu dareemayo inuu yahay dhibane, fadlan ha u sheego dheqan-celiyaha ama maa'mulaha. Dheqan-celiyaha/Maa'ulaha ayaa barayo-haddii gardaraysi dhexday, waxaa loo gudbinayaa degmeda.